Ibhizinisi Lamanethiwekhi Omphakathi | Martech Zone
UMsombuluko, May 11, 2009 NgoMgqibelo, Januwari 21, 2017 Douglas Karr
UDavid Silver, ongxiwankulu osafufusa osebenza kakhulu kwezokuxhumana nabantu, ubhale kanje I-Social Network Business Plan: Amasu Awu-18 Azodala Umnotho Omkhulu. Bengilokhu ngifunda le ncwadi ngentshisekelo - ngoba ngingumsunguli ngokubambisana Encane i-Indiana futhi umnikazi we ingosi yokuxhumana nabantu yamaNavy Veterans.
Amanethiwekhi womabili anamamodeli nezinhloso zebhizinisi ezihluke kakhulu. UPat Coyle ungumnikazi futhi usebenza iSmall Indiana futhi ubheke ukusebenzisa ithalente langaphakathi elizokwakhiwa okuphelele inethiwekhi - ukuletha ndawonye ithalente, ukunqanda ukumuncwa kwengqondo, ukusekela ezobuciko nokuzijabulisa kwasendaweni, nokunikeza isikhungo sobuciko nemibono. Kukhona ithani lamathuba nethuba lokuqhubeka nokwakha iSmall Indiana - ngakho-ke angiboni uhlelo lwebhizinisi olukhona okwamanje (yize ngizokwabelana ngencwadi noPat).
AmaNavy Vets asendleleni yokuba yinkampani yezikweletu engenzi nzuzo. Umgomo wamaNavy Vets ukuthi ube yinethiwekhi yokuxhumana enkulu kunazo zonke futhi engcono kakhulu Ama-Veterans aseMelika aseMelika. Noma ikuphi ukwenza imali kwenethiwekhi kuzonikelwa ezinhlanganweni zosizo zabadala njengoba kuvotelwe amalungu azo. Ngilangazelele ukubhala isheke lokuqala kungekudala! Akungabazeki ukuthi inethiwekhi izoshintsha izimpilo… futhi izehlukanise namanye amanethiwekhi ezempi abheke ukwenza inzuzo emuva kwalabo bomakadebona asebenikele kakhulu.
Uhlelo lweSocial Network Business Plan lwenza umbono ohluke kakhulu wokuthi izinkundla zokuxhumana kufanele zenze kanjani imali. Ngamafuphi, amandla ezinombolo ngaphakathi kwenethiwekhi kufanele asetshenziswe njenge- ukudluliselwa network ukushayela ibhizinisi ezinkampanini. Cabanga ngebhange, isitolo, inkampani yabameli, njll okusemthethweni [faka imboni lapha] yeSmall Indiana. Yilapho uDavid Silver abona khona amandla.
Angikwazanga empeleni ukuhlanganisa amasu ayi-18 ukuze ngiwabhale lapha… Ngicabanga ukuthi kuningi kakhulu empeleni. UDavid ufaka incwadi ephelele yokuthola nokuthenga, ukukhula, ukwenza imali nokuthengisa inethiwekhi yakho yokuxhumana nabantu. Kusazobonakala ukuthi ukuhanjiswa kuzobalwa ku- $ 600 kuye ku- $ 1,000 ngelungu ngalinye elisekelwa nguDavid… amamiliyoni amanethiwekhi we-Ning namakhulu ezigidi zabasebenzisi… leyo yimali eningi ehleli laphaya.
Uma ungusomabhizinisi osebenza kanzima ongazinikela ekusebenzeni imini nobusuku ukuze ukhulise inethiwekhi yakho yokuxhumana nabantu - kunalokho kungaba yincwadi oyifunayo nje! Ngingathanda ukubona izibonelo zomhlaba wangempela zokuhambisana necebo ngalinye elisencwadini. Ngokwengxenye enkulu, kubonakala sengathi lencwadi isibikezelo esincane kunecebo lebhizinisi.
Ngokuqondene nesibikezelo sikaDavid, noma kunjalo ... ngiyavuma! Amandla enethiwekhi yokuxhumana nabantu awekho ezicini, ipulatifomu, izinombolo… kusesithombeni senethiwekhi ukukhomba ithrafikhi nezwi lokumaketha ngomlomo kumikhiqizo yanamuhla.
Tags: isiliva likaDavidamasu ezokuxhumana nabantuuhlelo lwebhizinisi lenethiwekhi yokuxhumana nabantuuhlelo lwebhizinisi lenethiwekhi yokuxhumana nabantu
Faka isicelo se-Google Analytics Campaign Querystring ngamandla usebenzisa i-jQuery